Tweed-New Haven Airport kuenda kuTampa ndege dziri paAvelo Airlines izvozvi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Tweed-New Haven Airport kuenda kuTampa ndege dziri paAvelo Airlines izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Caribbean • nhau • vanhu • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Ndege yeAvelo Airlines inosimuka Tweed-New Haven Airport (HVN).
Avelo Airlines yakatanga sevhisi kubva kuEast Coast base paHVN neChitatu chapfuura (Mbudzi 3) nendege yayo yekutanga kuenda kuOrlando. Tampa Bay ndiyo yechitatu yenzvimbo nhanhatu dzakakurumbira dzeFlorida nzvimbo Avelo Airlines inoshanda kubva kuHVN.
Iyi sevhisi paBoeing Next Generation 737-700 ndege inoshanda Muvhuro, Chishanu neMugovera.
Ndege inosimuka HVN na2:30 pm ichisvika TPA na5:25 pm.
Ndege inodzoka inosimuka TPA na6:15 pm ichisvika HVN na9:00 pm.
Avelo Airlines ichakwira kuenda kunzvimbo yayo yechitatu yeFlorida nhasi kubva kuTweed-New Haven Airport (HVN) - Tampa Bay.
"Tinofara kuenda kunzvimbo yechitatu yeFlorida kuFlorida masikati ano," akadaro Sachigaro weAvelo uye CEO Andrew Levy. "Tiri kuita kuti zvive nyore uye nyore kuti vagari vekuSouth Connecticut vasvike kuTampa. Nemari yedu yekusuma yakadzikira, Tampa nedzimwe nzvimbo shanu dzakanyura nezuva dzeFlorida kunzvimbo dzinoshandiswa naAvelo dzave kutengeka kupfuura kare. "
Iyi sevhisi paBoeing Next Generation 737-700 ndege inoshanda Muvhuro, Chishanu neMugovera. Ndege inosimuka HVN na2:30 pm ichisvika TPA na5:25 pm Ndege inodzoka inobva TPA na6:15 pm ichisvika HVN na9:00 pm.
"Nhasi kusimuka kwekutanga kuenda kuTampa Bay ndechimwe chiitiko chinonakidza mukudyidzana kwedu kuri kukurumidza kukura neAvelo pano paHVN," akadaro Tweed-New Haven Airport Executive Director Sean Scanlon. "Simba pano panhandare yendege uye munharaunda mumazuva mashoma apfuura rave richishamisa sezvo isu tichitanga nguva itsva uye ine simba paHVN."
Avelo Airlines yakatanga sevhisi kubva kuEast Coast base paHVN neChitatu chapfuura (Mbudzi 3) nendege yayo yekutanga kuenda kuOrlando. Tampa Bay ndiyo yechitatu yenzvimbo nhanhatu dzinozivikanwa dzeFlorida Avelo Airlines inoshanda kubva kuHVN. Pamusoro peFort Lauderdale (iyo yakatanga sevhisi neChishanu chapfuura), Orlando neTampa Bay, Avelo ichatanga kubhururuka kuenda kuFort Myers, Palm Beach neSarasota mumazuva nemavhiki ari mberi.
Pakati pemhomho yevanhu, mitsetse mirefu, kufamba marefu uye kutsvikinyidzana kwemotokari kunosangana kune dzimwe nhandare dzendege dzinogarogarwa nevafambi veConnecticut, HVN inopa inozorodza uye yakapusa imwe nzvimbo yekumusha yendege ruzivo. HVN iri padyo nemigwagwa mikuru mikuru uye njanji dzevafambi inoita kuti ive airport iri nyore uye iri nyore kupinda muConnecticut.
Avelo ndiyo ndege yekutanga kupa ndege dzisingamire pakati peHVN neFlorida. Kusvika kwaAvelo kuHVN kunoratidzawo kuwedzera kukuru kwesevhisi paHVN mumakore anopfuura makumi matatu. Avelo iri kuisa mari inosvika miriyoni imwe nemazana maviri emadhora kubatsira kusimudzira nekuvandudza zvivakwa nemashandiro sechikamu chechirongwa chemadhora miriyoni zana paHVN. Kuwedzerwa kwenhandare yendege kuchasanganisira terminal nyowani uye yakawedzera runway inotungamirwa neairport operator Avports.
Mumazuva makumi mapfumbamwe adarika, Avelo akahaya vanopfuura makumi masere neshanu veHVN-based Crewmembers (izvo zvinodaidzwa nendege vashandi vayo), kusanganisira vashandi vendege, vatyairi vendege, vamiriri vevashandi vepanhandare yendege, mabasa ane chekuita nemashandiro, pamwe nemamaneja nevatariri. Avelo neHVN vanotarisira kuve nevanodarika zana nyanzvi dzendege dzakavakirwa panhandare yendege mukupera kwegore rino.